Sargaal Sare oo ONLF ka tirsan oo Maanta Jigjiga siwayn loogu soo dhaweeyay | ogaden24
Sargaal Sare oo ONLF ka tirsan oo Maanta Jigjiga siwayn loogu soo dhaweeyay
Waxaa maanta magaalada Jigjiga ee xarunta Gobolka Faafan soogaadhay halgame Maxamuud Dayib Cabdulaahi oo kamid ah Golaha Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya JWXO.
Halgame Dayib oo mudo badan kunoolaa wadanka Sudan ayaa markuu Jigjiga soo gaadhay sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay imaatinka uu yimid dhulkiisii hooyo oo mudo loodiiday in uu cagaha soo dhigo. Balse uu Allaah SW ugu mahadinayo in uu soogaadhay wadankiisii oo nabad ah.
Waxaa sidiiran usoo dhaweeyay halgame Dayib Qaar kamid ah bahda Warfaafinta JWXO oo uu hogaaminayo kuxigeenka Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Maxamed Ibraahim Mursal, kuwaas oo si farxad leh usoo dhaweeyay.
Halgame Maxamuud Dayib Cabdulaahi ayaa udambeeyay kumanaan kamid ah madaxda iyo Kaadirka JWXO oo maalinkasta soogaadha dhulkoodii hooyo iyagoo doonaya in ay dadkooda laqaybsadaan farxada iyo wanaaga uu Allaah SW keenay.